नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघको प्रेस बिज्ञप्ति | RatoTara.com Websoft University
नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघको प्रेस बिज्ञप्ति
काठमाडौ । रातो तारा डट कम, छिमेकी मुलुक भारतले भंसार महशुल ०% मा झारेको सम्बन्धमा भारत सरकारले २०७९ जेठ १० गते उच्च उपभोक्ताहरुलाई राहत दिनका लागी खाने तेलको भन्सार महशुल ०% गरेको छ । खाने तेलमा 651 को दर ५% गरी भारतमा सरदर नेरु ११. - प्रति के.जी. को सरकारी महशुल पर्न जान्छ । नेपालमा भन्मार महशुल १० र मु.अ.कर १३५ गरी सरदर प्रति केजी रु. ६0-६५ सम्म सरकारी दस्तुर लाग्ने गर्दछ । यस कारण नेपाली उत्पादन अति महंगो पर्ने भएको हुनाले खुल्ला सिमानावाट अनाधिकृत रुपमा चोरी पैठारी भई खाने तेल नेपाल भित्रिएको अवस्था छ । यसले नेपाल सरकारको राजस्वमा पनि कमि आउने व्यहोरा समेतजानकारी गराउदछौं ।
नेपालवाट यस आ.व.को वैशाख मसान्त सम्ममा ८७६० अर्व वरावरको वनस्पति तेल भारत निकाशी भएको छ । भारत सरकारले ०% मा भन्सार महशुल झारेको कारणले नेपालबाट भारत निकाशी हदै आएको वनस्पति तेलको परिमाणमा उल्लेखनीय रुपमा कमि हुन जान्छ ।
समग्रमा वनस्पति तेल उद्योगहरु संकटोन्मुख भई समस्याग्रस्त भएको छन । यसको छिटो समाधान नगरेको खण्डमा उद्योगहरु वन्द नै हुन जाने र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रुपले गम्भिर असर पार्ने व्यहोरा समेत जानकारीको लागी अनुरोध गर्दछौं ।
प्रस्तुत बजेटमा तयारी यस्तु/सामानलाई कच्चा पदार्थ भन्दा पनि एक तह कम भंसार महसुल लागु गरेकोले सो लाई अविलम्ब खारेज गर्नुपर्ने । उपभोक्ताहरुलाई चरम महड्वीबाट राहत दिन र भारतबाट अनाधिकृत रुपमा आउने खाने तेल रोबनका लागी कच्चा खाने तेलको आय्रातमा भन्सार महशुल ०४ र मु.अ.करमा ४०% छुट दिनुपर्ने ।
प्रस्तुत आ.व. २०७९/०८० को बजेटवाट बनस्पति घ्यू तेल उद्योगहरुलाई परेको असर सम्बन्धमा, हालै नेपाल सरकारबाट प्रस्तुत गरीएको बजेटमा बिरौधाभाषपुर्ण निति अवलम्बन गरी यससंग सम्बाखित उद्योगहरुलाई थप संकटोत्मुख अवस्थातर्फ धकेलिएको ठहर यस संघको भएको हुँदा स्वदेशी उद्योगहरुलाई
निम्नलिखित विषयमा गम्भिर एव दिकालीन असर पर्न जाने भएकोले स्वदेशी उद्योगहरुलाई राहत एव संरक्षण प्रदान गर्नका लागी निम्नलिखित व्यहोराहरु जानकारीको लागी अनुरोध गर्दछौ ।
प्रस्तुत बजेटबाट स्वदेशी वनस्पति ध्यू तेल उद्योगहरुलाई परेको असर सम्वन्धमा : नेपालमा कच्चा पदार्थ १०४ भंसार महसुलमा आयात गरी सो को प्रशोधन गरी विकी वितरण गर्दै
आईरहेको थियो । प्रशोधित तैलमा आयात महसुल १४ प्रतिशत थियो जुन कच्चा पदार्थ भन्दा एक तह मात्र बढी थियो । हाल सरकारले ल्याएको आ.व. २०७९/८० को बजेटबाट बिशेष उद्योगहरु [जस्तै बिस्कुट र चाउचाउ) लाई प्रशोधित पाम र पामोलीन तेल आयात गर्न १% भंसार महसुल, अर्घात
हाल/साविकको व्यवस्था मा ६६:६७ % घ्रुट दिई तयारी माल भन्दा कच्चा पदार्थको भंसार महसुल एक तह कम हुने नितिबाट बिरोधाभाष पुर्ण तरीकाले औद्योगीक विकासमा गम्भिर असर पुग्याईएको छ। जस्को दिर्घकालिन प्रभाव निश्चित रुपमा पर्ने देखिन्छ ।
उद्योग तया मुलुकमा पर्न जाने प्रभावहरु निम्न बुँदामा उपभोक्ताहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत दिनका लागी खाने तैलको महशुल दर कम गर्नुको सट्टा अन्य उद्योगहरुलाई कम महशुल दरमा तयारी खाने आयात गर्न दिने निति व्यवहारीक र विवेकपूर्ण नरहेको अवगत गराउदछौं ।
पदार्थ भन्दा बढी मुल्यमा तयारी माल सामान आयात हुन्छ ।
कच्चा पदार्थमा तिर्दै आएको १०, भंसार महसूल भन्दा तयारी सामानमा १, महसूल तिदाँ सरकारको राजश्वमा गम्मिर असर पर्न जान्छ । साथै सरकारको स्थानिय उद्योगलाई बढावा दिने र तयारी वस्तु भन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार १ तह कम हुने नितिको विरोधामाष समेत हो ।
कच्या पदार्थ प्रशोधन गरी उत्पादन हुन्छ,जुन साबुन
उद्योगको कच्चा पदार्थ हो । तयारी सामानको आयातमा बृदि हुँदा उत्पादन न्युन हुन्छ र साबुन उद्योगले कच्चा पदार्थ आयातमा बृदि गर्नु पर्ने हुन्छ । यसबाट अतिरिक्त बहुमुल्य मुद्रा बिदेशी मुद्दा बिदेशीने कममा बुढि हुन्छ । यसो हुदा अर्थतन्त्रमा रोजगारी, बिद्युत खपत, आयकर जस्ता अन्य
सूचकहरुमा प्रत्यक्ष असर पर्न जान्छ ।